I-Valentine Isithethe Sinye-I-Self Self Love Ceremony
by UMbusi uLaurie Sue Brockway
I-Valentine Ritual for One
"Ukuthandana nawe yimfihlo yokuqala yovuyo." --Robert ngakumbi
Akukho nto ehlabathini ehlaba umvakalelo wokuthandana nokuthanda! Abaninzi bethu bacinga ukuba badibanise umdlalo wethu ogqithiseleyo kwaye baxoshe iinyawo zethu ... okwaninzi nangakumbi bethu bacinga ubudlelwane njengobambiswano obomi obusinika ukutya kwaye sivumela ukuba sihlanganyele thina kunye nothando lwethu ngendlela ejulile nangomphefumlo.
Silangazelela ubudlelwane obuqinileyo nolonwabo kunye nemitshato, kunye nobomi basekhaya obubonelela ukhuseleko kwaye luqinile ngokwaneleyo ukuba sibe sisiseko sezinye izinto esizenzayo kwihlabathi.
Nangona abantu abaninzi bevakalisa umnqweno omkhulu wokwenene uthando , kutheni baninzi banokufuna? Kutheni abantu abaninzi besaba ukuthanda uthando? Izizathu zininzi, kwaye zinzima njengoko ngamnye umntu onqwenela uthando lokwenene. Sekuneminyaka engamashumi ama-25 namava nje ngumbhali weengxelo ezikhethekileyo ubudlelwane, kwaye ke umphathiswa, umcebisi onomtshato kunye nomcebisi ngokomoya, kukho izinto ezimbini ezivelisa ixesha kunye naso. Enye into yokuba abantu abaninzi bavame ukucinga ngemilingo ngothando ngaphandle kokwenza umsebenzi osebenzayo kunye nomoya wokwenza ulwalamano kubo ... kwaye bahlale bephilile kwaye bephila. Okwesibini kukuba abaninzi banqumla amanyathelo abalulekileyo ekudaleni ubudlelwane beephupha zabo ngokulibala umgaqo-mkhulu wobudlelwane bobubele - ukuze sibe noluthando lokwenene nolunye olwaqalayo kufuneka sizithande.
Ndiyithethile ngaphambili kwaye ndiya kuwugxininisa kwakhona: Ukuyeka kwakho kuqala kwindlela eya kumtshato kunye nawe! Ukukhangela uthando ngaphandle, kwaye nokuba ufumana umntu obonakala ethanda ukukuncoma, unokuba yinto engapheliyo xa ungenalo isiseko esinamandla sokuzithemba. Kuzukisa ngokwakho okuvula umnyango omnye ukuba enze okufanayo.
Ndiyakholwa ukuba lo ngumthetho ongokomoya okhokela kwihlabathi lolwalamano nothando. Ndiye ndibonela rhoqo into eyenzekayo kwabasetyhini, kunye namadoda, xa benza umsebenzi ngokwawo ovumela ukuba badibanise nomnye umntu kwizinga eliphantsi kunye nomphefumlo. Ndiyibona yonke ixesha kwizibini ezithathayo ukuya esibingelelweni ngosuku lomtshato wazo kwaye zidibene ngokwenene nemiphefumlo yomnye, kunye nohlobo olujulile lomthando kunye nenhlanganyelo, njengoko bethetha izithembiso zabo zomtshato.
Ukuba akukho ntsebenziswano ebusweni, ngamanye amaxesha kunceda ukuyifakela uze uyenze. Kutheni ungenzi oko abantwana abakwenzayo xa bezama ukufunda indlela yabo yehlabathi - bazenza kwaye badlale isenzo. Kungaba yindlela yokuxhobisa ingqondo yakho engqondweni ukuba uvume, "EWE, ndifanelwe uthando, ulonwabo kunye nolwalamano oluhle kunye neyakho ... kunye nabanye."
Ukongeza kwimiba emininzi kunye neminye imimiselo eyimfuneko yokulungiselela uthando, isithethe sinceda ukusinika intloko yokuqala. Yingakho imikhosi yomtshato ibaluleke kakhulu. Ukuba ufuna ukwenza inkcazelo enamandla malunga nokulungela kwakho uthando ... thandana nawe kuqala uze uzibophezele ngokwakho. Ukuzimisela kwakho ukuthatha ukuma okunzulu ngothando ebomini bakho kuya kwenza imimangaliso kuzo zonke iindawo kwaye kuza kukuqalisa kwindlela entsha yokuba.
Uza kufuna ixesha elaneleyo, into ebalulekileyo yokugqoka, ikhandlela, iifilimi, iphepha okanye iphephancwadi kunye neepeni, isibuko, umculo kunye "nomculo wokuqala womdaniso", ukutya okubhiyozelayo kunye ne-libation (igrlasi yewayini okanye ijusi yamagilebhisi kakuhle), nantoni na enye ungathanda ukuquka:
Khanyisa ikhandlela uze ukhanyise kwigumbi.
Yenza umthandazo omfutshane: "Umoya oyingcwele kaThixo yonke into, nceda ugcwalise le ndawo ngendawo yakho engcwele. Ndixhase kwimigudu yam yokubonisa uthando lwam.
Hlala phantsi uze ucamngce ngeempawu ozifunayo kwiqabane. Ukuhlaselwa malunga noko ungathetha kumntu lowo wayemi phambi kwakho ngosuku lomtshato wakho.
Bhala izibhambathiso ezintathu (okanye ngaphezulu) ezithethileyo kuwe: "Ndiza kukuthembisa ukuba ndiyakuthanda lonke ixesha ... Ndiyathembisa ukuba ndizithanda ukuze ndikwazi ukufumana uthando lwakho ngokupheleleyo ... Ndiyathanda indlela endiziva ngayo xa kunye yakho ... njl.
Xa uziva ulungele, jonga kwisibuko uze uqhagamshele ngamehlo akho uze ufunde izibhambathiso kuwe. Kungenakukhathazeka ekuqaleni kodwa ungayidlulisela loo nto. Yazi ukuba izibhambathiso zakho zothando ziya kuthumela umyalezo onamandla kwindalo yonke ekulungele ukuthandana!
Bhiyozela umanyano wakho kunye nokuziphuzisa iwayini.
Dlala umculo waloo "umdaniso wokuqala," lowo unethemba lokuba naye ngolunye usuku oyintanda.
Umdaniso ... kwaye uzive uthando.
UMongameli uLaurie Sue Brockway ungumfundisi wezinkolo kunye nomtshato ongekho ngamabandla. Intsapho kunye noMoya oMphefumlelweyo kwi-Beliefnet.com. Uthando lomlobi kunye nomdali we-Find Your Soul Spiritual Mate, ikhosi ye-imeyile efumaneka kuphela kwi-selfhealingexpressions.com. Eli nqaku lichanekile kwincwadi yakhe ethi Goddess Is Friendly Girl Friend: Isikhokelo Sokufumana Uthando, Impumelelo Nolonwabo (Iincwadi zePerigee, Disemba 2002). U-Laurie Sue naye unobhala bokukhululwa kwe-Seductress ngaphakathi (i-Gramercy Books, uJanuwari 2004).
Ndingayinxibelelana Njani Neengelosi?
I-Animal Totem Igalari yezithombe: i-Oceanic Totems
Indlela Yokuhlala Ipholile Kwiindawo Zokushisa Ezifudumeleyo
2016 IiNqantyambo zamagama
12 I-Easter Imifanekiso yeencwadi
I-Blind Bogey kwiGalofu
I-10 yezona ziMfuyo zokuQala eziPhumayo
Uhlalutyo lombongo kaRobert Browning 'I-Duchess yami yokugqibela'
I-Domain Target (Iingcamango eziCacileyo)
Kutheni ama-Atheists athile xa amaKristu athi aya kukuthandazela?
Funda uMdaniso weDeskithophu yoMdaniso
I-Air Force enye Intlawulo
Ingxelo efutshane ka-Archimedes
Imfazwe yeNapolitan: iMfazwe yaseTolentino
Yiyiphi i-Ruling: Ngengozi ngokubetha ibhola leGolf ne-Practice Swing